Vonoan’olona feno habibiana : Karana vavy naolana dia nahantona tamin’ny tady | NewsMada
Vonoan’olona feno habibiana : Karana vavy naolana dia nahantona tamin’ny tady
Samy tao amin’ny distrikan’i Morafenobe, faritra Melaky no nisehoan’ireto vonoan’olona feno habibiana roa ireto, afakomaly. Ny iray, lehilahy maty norasarasaina antsy, ny faharoa, Karana vavy nahantona tamin’ny tady rehefa avy naolan’ny jiolahy.
Tsy milamina intsony ! Olona roa no indray novonoin’ny jiolahy tamin’ny fomba feno habibiana tao amin’ny fokontany Ravinala, Faritra Melaky, distrika Morafeno. Afakomaly no hitan’ny fokonolona tany an-toerana ny fatin’ireo niharam-boina raha ny alahady teo kosa ny nitrangan’izany raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana. Voalaza fa mpiambina ny tanimbarin’ny lehiben’ny distrika ilay lehilahy maty notetitetehan’ny jiolahy. Tsy nisy zavatra very anefa tamin’izany fa ny fatiny efa mihosin-dra mitsirara eo akaikin’ny tanimbary no nahavariana ny olona. Tsy mifanalavitra amin’ny nahitana ny fatin’ity lehilahy niharam-boina ity koa anefa no nahitana ny fatin’ilay teratany Karana vavy nihantona tao an-tranony. Femeda Samcoidine, 58 taona ny anaran’ity Karana vavy niharam-boina ity. Hita faty nihantona tao an-tranony izy. « Tamin’ny fomba feno habibiana no namonoan’ny jiolahy ireto niharam-boina ireto. Mety ho iray ihany ireo tompon’antoka tamin’ity vonoan’olona satria tsy mifanalavitra ny toerana nahitana ny fatin’izy ireo. Nofatotra tongotra aman-tanana sady voatapim-bava tamin’ny lamba ilay teratany karana tamin’ny nahitana azy nihantona tamin’ny tady », hoy ny fampitam-baovao avy any an-toerana.
Mipetra-drery ity Karana vavy niharam-boina ity ka nanararaotra mihitsy ireo nahavanon-doza, saingy nahavariana ny mponina any an-toerana ny momba ity vonoan’olona ity, tsy naka na inona na inona ireo jiolahy. Tsy nahitana soritra fanendahana na halatra tao an-tranony satria tsy nisy nokitihan’ireo olon-dratsy ny fananany. Manaporofo izany, tsy nisy nanombinana ny vola mitentina 10 tapitrisa Ar tao aminy, niaraka tamin’ireo firavaka volamena nipetraka tao an’efitrano fandraisam-bahiny. Lasa nitsoaka avy hatrany kosa ireo nahavanon-doza rehefa avy namono ilay niharam-boina.
Mandry an-driran’antsy ny mponina…
Tonga teny an-toerana nanao fizahana ny razana ny dokotera sy ny zandary avy ao amin’ny borigadin’i Morafenobe. Vonoan’olona indroa miantoana no hita tao Morafenobe izay sokajian’ny rehetra fa vonoan’olona tsotra izao izany satria tsy nisy fanafihana na vaky trano fa namono fotsiny no nataon’ireo olon-dratsy dia lasa ry zalahy taorian’izay. Hatreto tsy fantatra izay tena tompon’antoka tamin’ity vonoan’olona feno habibiana ity.
Mitaintaina tanteraka, araka izany, ny mponina ao amin’ny faritra Melaky manoloana ny tsy fandriampahalemana miseholany any an-toerana. Ankoatra ny asan-dahalo, mahazo vahana koa ny vonoan’olona toy izao. Tsy afa-manoatra anefa ny mpitandro filaminana manoloana izany satria be noho vitsy, manginy fotsiny ny hasarotry ny lalana.
Ny toy izao no isan’ny mampirongatra ny fitsaram-bahoaka na dia melohin’ny lalàna aza izany satria leo amin’ny afitsoky ny dahalo ny ankamaroan’ny olona ka mitondra faisana avy hatrany izay mifanehatra amin’izy ireo. Manao antso avo amin’ireo tompon’andraikitra mba hijery akaiky ity raharaha tsy fandriampahalemana ao amin’ny faritra Melaky ity ny mponina ao an-toerana. Mitaintaina saika isan’andro ary tsy afa-manoatra intsony izy ireo fa miandry fotsiny izay ataon’ireo dahalo.